Wadahadalkii Galmudug Iyo Ahlusuna Waljameeca oo burbur ku dhow | SAHAN ONLINE
Wadahadalkii Galmudug Iyo Ahlusuna Waljameeca oo burbur ku dhow
MUQDISHO – Waxaa weli la isku mari la’yahay Wadahadalada u dhaxeeyey maamulada Galmudug iyo Ahlusuna oo ka socday magaalada Muqdisho ,waxaana soo dhammaatay waqtigii loo qabtay in wadahadalada lagu soo gabagabeeyo.
Wararka ayaa sheegaya in Wadahadaladu ay si hoose uga socdeen Madaxtooyada kaasoo ayna garwadeen ka ahayd dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Maamulka Ahlusuna ayaa la sheegaya in wadahaladu dhankooda ka socon la’yahay iyagoona wata shuruudo adag ,waxaana laga cabsi qabaa in wadahadaladan uu fashil ku yimaado.
Wasiirka Amniga Galmudug Cismaan Ciise Taar-dhuleed ayaa ku eedeeyey Ahlusuna in ay diidan yihiin jiritaanka maamulkooda isla markaana haddii aan illaa maanta xal la helin aadi doonaan Cadaado ayna qabsan doonaan doorashadii loo balamay.
Wadahadalada Galmudug iyo Ahlusuna ayaa mudadii loo qabtay waxa ay ku ekayd shalay mana muuqato wax natiijo ah oo ka soo baxay Wadahadaladan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Galmudug ayaa horay ugu heshiiyey in 30-ka bishan la qabto doorashada Madaxweynaha Galmudug inta ka horeysana la bilaabo wadahadalo Ahlusuna looga qeyb gelinayo maamulka Galmudug.